Ny Linux dia rindrankajy mpandrindra (sokajy mpandrindra milina na operating system)ny milina fikajiana na mpikajy namboarin'i Linus Torvalds. Ny mampalaza azy dia ny fampiasana azy maimaimpoana (free software)sy ny fanovana azo ataon'ny rehetra (open source).
Ny linux dia avy amin'ny software mpandrindra UNIX izay fampiasana amin'ny milina fikajiana lehibe (workstation na supercomputer) ka namboarina mba ho azo ampiasaina amin'ny milina fikajiana maivana sy fampiasa birao (desktop na PC).
Noho ilay izy azo ovana ho an'ny rehetra dia samy nanamboatra karazany maro ny orinasa informatika tsirairay ka ireo marika anisan'ny be mpampiasa amin'izao fotoana no fintinina amin'ny tabilao eto ambany. Antsoina hoe Linux distribution ilay marika iray.
Linux malagasy Archived Aprily 11, 2021 at the Wayback Machine
Informatika malagasy (indrindra ny wiki)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Linux&oldid=1022252"
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 06:11 ity pejy ity.